Author Topic: Sushma Karki - model and actress (Read 170585 times)
« Reply #10 on: February 28, 2012, 03:15:55 PM »
Quote from: fifafifa on February 28, 2012, 11:54:12 AM
What is the guy doing?
« Reply #11 on: February 28, 2012, 03:16:26 PM »
« Reply #12 on: February 28, 2012, 03:16:41 PM »
« Reply #13 on: February 28, 2012, 03:16:56 PM »
« Reply #14 on: May 03, 2012, 09:34:43 PM »
शुष्माको आइटम नृत्यमा एनटिभीको प्रतिबन्ध उनको निरत्य सारै अस्लिल भएको कारण!!
सिनेमा जिनदगानी दर्पण छायाँको आइटम गीत र फुटेजलाई नेपाल टेलिभिजनले अश्लिल भन्दै प्रसारणमा रोक लगाएको छ । सिनेमा 'लूट'मा आइटम डान्स गरेर झन् चर्चामा आएकी नायिका शुष्मा कार्कीले 'यति यति पानी गंगै रानी....'बोलको गीतमा उत्तेजक नृत्य गरेकीले प्रसारणमा रोक लागइएको हो ।
सिनेमा जिन्दगानी दर्पण छायाँका निर्माता रोहित पुरीका अनुसार प्रसारण भएको दुई सातापछि गीतलाई प्रसारणमा प्रतिबन्ध लागाइएको हो । यसअघि पनि नेटिभीले गायिका कोमल ओलीको गीतमा रोक लगाएको थियो । पुष्पा पौडेलको स्वर रहेको उक्त सिनेमाको गीत र फुटेज नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजन प्लसमा प्रसारण भइरहेको थियो ।
सिनेमाको ट्रेलरलाई सेन्सर गरिनुपर्ने माग नेपाल टेलिभिजनले गरेको छ ।
« Reply #15 on: May 09, 2012, 10:41:44 AM »
« Reply #16 on: May 10, 2012, 11:18:40 AM »
तीन लाखमा सुष्मा नाङ्गिन तयार
हिरोईन सुष्मा कार्की रियल लाईफमा जति विन्दास छिन अब उनको रियल लाईफको हाऊभाऊ फिल्म 'विन्दास' भित्र देख्न पाईने छ । राजु गिरीको निर्देशनमा आउदो जेठ १ गते देखि फ्लोरमा जाने सो फिल्मका लागि सुष्माले हाल सम्मकै उच्च रकम लिएकी छिन् ।
सुष्माले सो फिल्मका लागि ३ लाख ५ सय ५१ रूपैयामा एग्रिमेण्ट गरेकी हुन् । 'अरू फिल्मबाट पनि एप्रोच आएको थियो तर मलाई यो फिल्मको स्क्रिप्ट अत्याधिक मन परेकाले एग्रिमेण्ट गरेको हुँ', सुष्माले भनिन् । 'मेरो फिल्मको क्यारेक्टरलाई सुष्मा बाहेक न्याय गर्ने अरू कोही हिरोईन देखिन त्यसैले उनले मागेको रकममा हामीले एग्रिमेण्ट गरेका हौ', निर्देशक राजु गिरीले बताए ।
फिल्मको जेठ १ गते बिहान बालाजु स्थित चलचित्र विकास कम्पनीमा मुर्हुत गरी सोही दिनबाट सुटिङ सुरू हुँदैछ । निर्माण पक्षले दिएको जानकारी अनुसार मुर्हतमा नेपाली काँग्रेसका एक नेता प्रमुख अतिथि हुने छन् । यस अघि बजार निर्माण गरेको कम्पनी मार्सल फिल्म्सको ब्यानरमा बन्न लागेको सो फिल्मलाई प्रस्तुतकर्ता भएर मधुकुमार श्रेष्ठ र निर्माताको ट्याग भिर्दै राजु केसीले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
३५ दिनका लागि सेडुल बनाएर धादिङ र काठमाण्डूमा सुटिङ हुने फिल्ममा यस अघि दिलमाया र द्रव्यमा अभिनय गरेका अशोक फुयाँल र डेब्यू गर्दै सुशान्त कार्की हिरोको रूपमा देखिने छन् । भोजराज देवकोटाले लेखेको फिल्ममा अर्जुन पोखरेलको संगीत समावेश छ भने फाईट तर्फ रोशन श्रेष्ठ फाईनल भएका छन् । यस अघि केही फिल्ममा चिफ असिस्टेन्ट भएर क्यामेरा चलाएका राजेन्द्र सापकोटाले क्यामेरा पार्टबाट डेब्यू गर्दै फिल्म खिच्नेछन् ।
« Reply #17 on: May 10, 2012, 11:18:53 AM »
« Reply #18 on: May 27, 2012, 09:13:22 PM »
« Reply #19 on: June 03, 2012, 01:12:24 PM »
हाफ कट्टु र पेन्टी कस्तो हुन्छ शुष्माले चिनाईदिने
रेम बिक, पोखरा, २०६९ ज्येष्ठ १८, बिहिवार
यो फोटो राम्रो संग हेर्नुस् त ! यो फोटो अहिले चर्चामा रहेकी नायिका शुष्मा कार्कीको हो । शुष्मा आफ्नो अभिनय भन्दा पनि अंग प्रदर्शनबाट बढि चर्चामा छिन् । ब्लकबस्टर फिल्म लुटको आईटम नम्बर 'उध्रेको चोली' बाट चुलिएको उनको चर्चा यतिबेला फिल्म 'बिन्दास' सम्म आईपुग्दा अझै बढेको छ । हाल विन्दासको सुटिङमा ब्यस्त रहेकी शुष्माले यो फोटोको विषयमा लामो समय पछि खण्डन गरेकी छन् ।
केहि महिना मलेशियाको एउटा कार्यक्रममा नाच्ने क्रममा वान पिस ड्रेसको साथमा पेन्टी समेत देखिने गरि प्रकट हुँदा खिचिएको शुष्माको यो फोटो संचारमाध्यमले गलत रुपमा प्रयोग गरेको उनले आरोप लगाएकी छन् । 'मैले वान पिस भित्र लगाएको कपडा पेन्टी नभई हाफ कट्टु हो' पोखरा स्थित विग एफएमको कार्यक्रम फिल्म डटकमसंग कुराकानी गर्दै शुष्माले भनिन्- 'कट्टु र पेन्टी पनि नछुट्याउने नेपाली संचारमाध्यम कस्तो खाले हुन् ?'
'मैले बारबार त्यो फोटोमा भित्र पट्टि लगाएको हाफ कट्टु नै हो भनेर भन्दा पनि उल्टो तरिकाले लेख्छन्', उनले कड्किँदै भनिन्- 'यीनिहरुलाई हाफ कट्टु र पेन्टी कस्तो हुन्छ भन्ने कु्रा पनि थाहा छैन कि के हो ? बरु थाहा छैन भने मै उनीहरुको अगाडी गएर कस्तो हुन्छ देखाईदिन्थेँ ।' एउटा नायिका भएर संचारमाध्यमलाई गाली गर्दैमा आफ्ना कर्तुतबाट बचिन्छ भन्ने सोँच हो भने त यी नायिकाको कुरा पनि ठिकै होला तर यो फोटोले प्रस्टसंग बताउँछ कि यो पेन्टि हो या हाफ कट्टु । यसै विषयमा विग एफएमका लागी प्रस्तोता संजोग बस्यालसंग चर्काचर्की हुँदा अन्ततः उनले फोन नै काटिदिईन् ।
यस्तै हाल छायाँकनमा रहेको फिल्म 'बिन्दास' मा आफू बिन्दास भएर देखिने शुष्माले बताईन् । फिल्मको कथा निकै मन परेको भन्दै शुष्माले मानसिक रूपमा नै तयार भएर बिन्दास भएर हट सिन दिन नहिचकि चाएको उनले बताईन् । फिल्ममा बेड सिन, किस सिन दिन शुष्माले कुनै कन्जुस्याईं नगरेको निर्देशक राजु गिरि को पनि भनाइ छ ।
हाल चर्चामा रहेको फिल्म एटिएमलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै शुष्माले त्यस्ता सिनलाई दर्शकले पचाउने भएकाले आफू पनि त्यस्ता दिन सिन गार्‍हो नमान्ने बताईन् ।